Karen Gillan – Stars – Channel Myanmar
Oculus (2013) Occulus (2013) လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Horror Movie ထဲမှာ Occulus က တစ်ကားအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲံ့ ကြောက်သထက်ကြောက်လာရမယ့် ဇာတ်လမ်းပါ။ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တာလား? သရဲတကယ်ခြောက်တာလား? ဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း အဖြေရှာရမယ့်ကားပါ။ ကြောက်စိတ်ဆိုတာ..... ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တာကနေ အစပြုတာများပါတယ်။ မှန်ထဲမှာရှိတဲ့ ပုံရိပ်ဟာ ပုံရိပ်ယောင်ပါ။ ပုံရိပ်ယောင်ကနေ မှန်ကြည့်နေတဲ့လူကို ပူးကပ်လာလေမလားလို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးပါသလား? တကယ်ကို ပူးကပ်လာခဲ့တဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ? သရဲပူးကပ်နေတဲ့မှန်က လူကို ဘယ်လိုများခြောက်လှန့်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? သရဲပူးကပ်နေတဲ့မှန်ကို သိပ္ပံနည်းကျနဲ့ ဖြေရှင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား? လူနဲ့သရဲနဲ့ အားပြိုင်ကြတဲ့အခါမှာ..... မှန်ကြည့်တိုင်း တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး ကြောက်ချင်ရင်တော့ ဒီဇာတ်လေးကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ ရုပ်ရှင်ကားကို Myo Nyunt က ဘာသာပြန်ပြီး အညွှန်းကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ရေးပေးထားပါတယ်
IMDB: 6.5/10 105,510 votes
Alex & The List (2018) အချစ်ဟာသ Romance ကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီ Alex and the list ဆိုတဲ့ အချစ်ဇာတ်မြူးကား ကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ဒီကားလေးကတော့ Burbank Film Festival မှာ Comedy Feature အနေနဲ့ winner ဆု ရရှိထားတာပြီး ဒီကားနဲ့ပဲ Best Actor Award ကို ရရှိထားတဲ့ Patrick Fugit က Alex အဖြစ် အဓိက ပါဝင်သရုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Alex ဟာ ခွေးချစ်တဲ့ လူရိုး လူအေး တစ်ယောက်၊ သူက Katherine ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ Katherine က ချမ်းသာတဲ့ ဂျူးမိသားစုက ဆင်းသက်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်၊ အဲ့တော့ သူမက Alexကို သူမ လိုချင်တဲ့ယောက်ကျားလေးပုံစံ၊ ပြောင်းလဲ စေချင်တဲ့အချက်တွေကို list ချရေးပြီး Alex ကို list ...
Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) ၁၉၉၅ လောက်ကတည်းက ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးခဲ့ပြီးသား Jumanji ဇာတ်လမ်းပြီးနောက် သီးခြားဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့ ထပ် ထွက်လာတာမို့ ရသအသစ်အ ဆန်းလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိ သတ်တွေ သဘောကျကြမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးလေးယောက် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကာ ဂျူမန်းဂျိ ကမ္ဘာထဲရောက်သွားပြီး စွန့်စားခန်းမျိုးစုံ ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အကြောင်းလေး တင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ကာလက အဲလက်စ် ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင် လေးဟာ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းဘုတ်ပြား လေးကို ကမ်းခြေနားက ကောက်ရ ခဲ့ပေမယ့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေပဲ ကစား ဖြစ်နေတာမို့ ဂိမ်းမကစားဖြစ်ဘဲ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ် ညမှာ ဂျူမန်းဂျိဘုတ်ပြားထဲက ဂိမ်းတွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး အဲလက်စ်က ဂိမ်း စက်ဖွင့်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ သူပါပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ လောက်ကြာခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းစက် က ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စပန် ဆာ၊ ဘယ်သန်နီ၊ မာသာနဲ့ ...
The Circle 2017 မင်းသားကြီး တွန်မ် ဟန့်ခ် နဲ့ မင်းသမီး အမ်မာဝက်ဆန်တို့ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ်ပါ။ IMDb ကတော့ 5.3 ပဲရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာတော့ တွန်ဟန့်ခ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တည်ထောင်ထားတဲ့ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ နည်းပညာကုမ္မကြီးတစ်ခုဆီကို သာမာန်ဝန်ထမ်းလေးအဖြစ် Mae Holland(အမ်မာဝတ်ဆန်) ရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရည်အချင်းတွေကြောင့် အမြန်ပဲ ရာထူးတွေ တက်လာခဲ့ပြီး ကုမ္မဏီရဲ့ အရေးပါတဲ့ လျှိုဝှက်ချက်တစ်ခုကို သိလိုက်ရပါတော့တယ်။ သူသိလိုက်ရတဲ့ အချက်က လူသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် အရမ်းကိုအရေးပါတဲ့ အရာကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါ..... ဒီရုပ်ရှင်က လက်ရှိ လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သတိထားမိစေချင်လို့ မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ သဘော ရိုက်ကူးထားပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလှည့်အပြောင်းနည်းပြီး အေးစက်စက်နိုင်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေ အကြိုက်မတွေ့ကြဘူးထင်ပါတယ်။ မြည်းစမ်းကြည့်ချင်သူတွေတော့ ကြည့်နိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ File Size : 800 / 400 Mb Duration : 111 minutes Quality ...